ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း. Show all posts
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အမှိုက်တွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းနေသလဲ
လူဦးရေ ၈ သန်း နီးပါး လောက် နေနေ ကြတဲ့ ရန်ကုန် မြို့ထဲမှာ တနေ့ တနေ့ အမှိုက် တန်ချိန် ၄၅၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ ကြားမှာ ထွက်နေ ပါတယ်။
ရန်ကုန် မြို့ရဲ့ လမ်းတွေ ပေါ်မှာ သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ဟာ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်တွေကို လုပ်နေ ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် လမ်းပေါ်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက် စွန့်ပစ် တာတွေနဲ့ နောက်ဖေး လမ်းကြား တွေမှာ ပစ်စလတ်ခတ် ပစ်နေ တာတွေ ကတော့ ရှိနေ တုန်းပါပဲ။
တနေ့ကို တန်ချိန် ၅၀၀၀ လောက် ထွက်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အမှိုက်တွေကို ဘယ်လို သိမ်းနေ သလဲ ဆိုတာကို ရုပ်သံဖိုင်မှာ တွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။
From : ဒီဗွီဘီ by ရဲဝင့်သူ
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/207559
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း, ပြည်တွင်းသတင်း, သတင်း-ဆောင်းပါး
ပန်းချီ ထင်လင်းနိုင်ရဲ့ ဘ၀ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း
ပုံတူ ပန်းချီ ရေးဆွဲပြီး အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပြုနေတဲ့ ပန်းချီ ထင်လင်းနိုင်ရဲ့ ဘ၀ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းကို ရုပ်သံ မှတ်တမ်း အနေနဲ့ ရှုစားကြ ရမှာပဲ
Originally published at - http://www.mcntv.biz
ဝါးဖောင်ကို အိမ်လုပ်၊ ရုန်းကန်ဖြတ်သန်း ဝမ်းရေး ဖြေရှင်းနေကြသူများ
“ဒီရေ ဖောင်ပေါ်မှာ နေလာတာ ကိုးနှစ်ရှိပြီ။ ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ဒီဝါးဖောင်ပေါ်မှာ နေဖြစ်လဲ ဆိုတော့ တောလုပ်ငန်းတွေ မလုပ်ချင်လို့ ဒီဘက်ကို တက်လာတာ၊ ဒီဘက်ကို ထွက် လာတော့ ဝင်းထရံ ရက်တတ်တော့ ဖောင်ပေါ်တင် တဲထိုးနေလို့ ရတယ် ဆိုတော့ ဖောင်ပေါ်မှာတင် တဲထိုးနေလိုက် တာပေါ့။ မြို့ထဲ အိမ်ငှားနေဖို့ ကျတော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ၊ ဒီဘက်ကို ကျူးမြေပဲ ပြောပါတော့။”
ဝါးဖောင်ပေါ်က အိမ်အများစုရဲ့ အကျယ်ဟာ ၈ ပေပတ်လည်လောက်ပဲ ရှိတာပါ။ မိသားစုများရင်တော့ နှစ်အိမ်တွဲ၊ သုံးအိမ်တွဲဆိုသလို ဆောက်နေကြပါတယ်။
“ဒီနားမှာ တီဗွီဘာညာကြည့်၊ ညနေကြ နားကြတာပေါ့။ ဟိုဘက်မှာ အိပ်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဝါးဖောင်ပေါ်မှာ နေသူအများစုဟာ ဝါးကပ်၊ ဝါးထရံရက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးကြတာပါ။”
ဝါးတွေကို ရေထဲကနေ ဟိုကောင်လေးထမ်းသလို ထမ်းတင်ရတာ၊ ထမ်းတင်ပြီး ဒီလိုချပြီးရင် လွှနဲ့ ဖြတ်ရသေးတယ်။ ငါးပေဖြင့် ငါးပေ၊ ခြောက်ပေဖြင့် ခြောက်ပေ၊ အဲ့လိုလေးတွေ ဖြတ်ရတယ်။ ဝါးဖြတ်ပြီးရင် ခွဲရတယ်၊ ခွဲပြီးရင်ပေါက်၊ ပေါက်ပြီးမှ တိုင်ပင်ပြန်ထိုး တိုင်ပင်ထိုးပြီးမှ ရက်ရတာ။ ရက်ရတာမကြာဘူး၊ ဒီလို ခွဲတာ၊ စိတ်တာ၊ ပေါက်တာက ကြာတာ။
ယောကျာ်းသားတွေက ဝါးထမ်း၊ မိန်းမသားတွေက ဝါးကပ်ထရံရက်နဲ့ တနေ့စာတနေ့ ဖြေရှင်းနေကြရတဲ့သူတွေက များပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195140
ဂျပန်တွင် ငလျင်လှုပ်အပြီး အပျက်အစီးဖြစ်နိုင်ချေ ဖန်တီးထားသည့် ရုပ်သံ ဖြန့်ချိ
ဂျပန်နိုင်ငံ အတွင်း ငလျင် အကြီး စားတွေ ဘယ်အချိန် မဆို လှုပ်ခတ်နိုင် တယ်လို့ သိပ္ပံ ပညာရှင် တွေက ဟောကိန်း ထုတ်လိုက် ပါတယ်။
ငလျင် ကြီးတွေ လှုပ်ခတ် အပြီး မြို့တော် တိုကျို ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှာ ပျက်စီးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အခြေအနေကို သရုပ် တူအောင် ဖန်တီး ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ် ရုပ်သံ တွေကိုလည်း ဂျပန် အစိုးရ ကပ်ဘေး စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့က ဖြန့်ချိ လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း အဆိုးဆုံးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်မြို့တော် တိုကျိုမှာ ပြင်းအား ရစ်ခ်ျတာစကေး ၇ ဒသမ ၃ ရှိတဲ့ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ကျန်ခဲ့မယ့်အခြေအနေကို ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်နဲ့ သဏ္ဌာန်တူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်သံကို ဂျပန်အစိုးရ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ပြသထားပါတယ်။
၁၃ မိနစ်ကြာတဲ့ ဒီရုပ်သံထဲမှာ တိုကျိုမြို့ နေရာအသီးသီးကို ချယ်မှုန်းထားပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင် ငလျင်နဲ့ မီးလောင်မှုတွေကြောင့် ခန့်မှန်းခြေ လူ ၂ သောင်း ၃ ထောင် သေဆုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အဆောက်အဦနဲ့ အိမ်ခြေ ၆ သိန်း ၁ သောင်းကျော်လည်း ပျက်စီးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ပြီးပြီးချင်း မြို့ခံ ၁၃ သန်းရဲ့ တဝက်လောက် ရေမရှိဘဲ ဖြစ်မယ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း ကွန်ရက်တွေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးမယ်၊ အခြေခံ အဆောက် အဦတွေကို ပြန်တပ် ဆင်ဖို့ သီတင်းပတ်နဲ့ ချီပြီး အချိန်ယူ ရမယ်၊ လူ ၇ ဒသမ ၂ သန်းဟာ ရေနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်တဲ့ ဘေးကင်းရေး ဌာနတွေမှာ ခိုလှုံ ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်း တွက်ချက် ထားပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်ပျက်စီးမှု တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၉၅၀ ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေသတွင်းမှာ အင်အား ရစ်ခ်ျတာစကေး ၉ ထိရှိတဲ့ ငလျင်ဟာ လာမယ့် နှစ် ၃၀ အတွင်း လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ အစီရင်ခံစာက ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံ အရှ့မြောက် ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပြင်းအား ရစ်ချတ်တာစကေး ၉ ထိ ရှိတဲ့ ငလျင်ကြောင့် ကြီးမားတဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူအယောက် ၁၆၀၀၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖူကုရှီးမား နျူကလီးယားကပ်ဘေး သင့်ခဲ့ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/170288
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
လျှပ်စီးလက်ပြီး မိုးကြိုးပစ်ချမှု ရုပ်သံ သုတေသီများ ဖြန့်ချိ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါ နည်းပညာ အင်စတီကျူ က သုတေသီ တွေက မိုးကြိုးပစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ရုပ်သံနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူး ထားပါတယ်။
ဒီရုပ်သံ မှာတော့ ကောင်းကင် ပေါ်က ဖြာကျလာတဲ့ လျှပ်စစ် စီးကြောင်းတွေ မြေပြင်ကို ထိမှန်ပြီး အလင်းဖြာကာ မိုးကြိုး ပစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်ကူး တင်ပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စက္ကန့် အနည်းငယ်သာ ကြာတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းတွေ ကောင်းကင်ပေါ်က ဖြာကျ လာတာကိုလည်း အနှေးပြကွက်နဲ့ သရုပ်ဖော် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ ၂၄ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ဖလော်ရီဒါ နည်းပညာ အင်စတီကျူ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/152148
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, May 29, 2016 No comments:
တို့ဗိုလ်ချုပ်ကို အမှန်တကယ် ဘယ်သူသတ်ခဲ့သလဲ
ဗမာ့ တပ်မတော်မှာ အရာရှိ အဖြစ် သင်တန်းပေး နေတဲ့ သူရ ဦးတင်ဦးဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက မေမြို့မှာ တပ်တွေကို စစ်ဆေး ခဲ့ချိန် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင် ကြီးကို နောက်ဆုံး တွေ့မြင် ခဲ့ရပါတယ်။ ကာကီရောင် စစ်ဝတ်စုံ ခပ်ပွပွနဲ့ ဖော့ဦးထုပ် ဆောင်းထားပြီး ခပ်တည်တည် အနေအထားနဲ့ တပ်တွေကို စစ်ဆေး ခဲ့ချိန်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အတူ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်လည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်။
ဦးနေမင်းဟာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကာလမှာ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို သတင်း ပေးပို့လို့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကို အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၁မှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သူ သတင်းသမား တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်စက်ရောင်က ဂဠုန်ဦးစော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ကို လုပ်ကြံဖို့ ဗမာပြည် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီက ဇာတ်လမ်း ဆင်ခဲ့တာလို့ အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ သူ့ကိုပြော ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးနေမင်းက ပြောပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 20, 2015 No comments:
တင်ဆက် - မောင်တူး
ရိုက်ကူး - လေးလေးမွန်၊ စောဖိုးစီ၊ စည်သူဇေယျနှင့် DVB သတင်းထောက်များ
DVB Youtube မှ ကူးယူ မျှဝေသည်။
Original link - https://youtu.be/B0apTQ-zdkY
ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ဆိုလျှင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီးများ တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေး သွားခဲ့ ရသည်မှာ (၆၈) နှစ် ပြည့်မြောက် ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အာဇာနည်နေ့မှာ နှစ်တစ်နှစ်တွင် ဝမ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးနေ့ဟု ဆိုလျှင်လည်း မမှားပေ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအဝင် နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ် ခံရသည် ၊့
ယနေ့ထက်တိုင် မမေ့ရက်နိုင် သေးသော အာဇာနည်နေ့ အထိမ်း အမှတ် ရုပ်သံ မှတ်တမ်း တစ်ခုကို တင်ဆက် လိုက်ပါသည်။
Original link - http://www.youtube.com/attribution_link?a=djyU_aspvgc&u=/watch%3Fv%3DUylWLnG1CVs%26feature%3Dem-uploademail
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီ
DVB TV - ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၅ နှစ် မှတ်တမ်း
ရိုက်ကူး - ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက်များ
တည်းဖြတ် / တင်ဆက် - မောင်တူး
From: DVB Burmese - YouTube
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၁)
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၂)
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၃)
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၄)
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၅)
မန္တလေး တက္ကသိုလ် သမိုင်း ပုံရိပ်များ အပိုင်း(၆)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 14, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း, သမိုင်း
လောက်ကိုင် ရုပ်သံ မှတ်တမ်း
DVB TV - လောက်ကိုင် ရုပ်သံမှတ်တမ်း
ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ်- ခွန်ဇော်ဦး
မှတ်တမ်းဆိုတာ အနာဂတ် အတွက် သမိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သလို ပစ္စုပ္ပန် အတွက် သက်သေတွေပါ။
From: DVB Burmese - YouTube မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
သတင်း၊ နည်းပညာ၊ ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဗဟုသုတများ မျှဝေခြင်း
(Tasty Trip) ရသများနဲ့ ခရီးစဉ်7March 2015
မိုးကုတ်မြို့ - အပိုင်း ၃
မိုးကုတ်မြို့က ကျောက်မျက် ရတနာ ရောင်းဝယ် ကြတဲ့ နေရာကို ထာပွဲလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဖိုးတန် ကျောက်မျက် ရတနာ ပေါင်း များစွာ ရောင်းဝယ် နေကြတဲ့ ထာပွဲဈေးနဲ့ ကျောက်သွေး လုပ်ငန်းတွေ ကျောက်မျက် ပန်းချီ လုပ်ငန်းတွေ အကြောင်းကို ရသများနဲ့ ခရီးစဉ်မှာ တွေ့ရ မှာပါ။
မိုးကုတ်မြို့ - အပိုင်း ၄
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာလောက် ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဒီရွာ aလးဟာ မက်မွန်သီးတွေ၊ မက်မွန်ပင်တွေ aပါများခဲ့ တာကို အစွဲပြုပြီး မက်မွန် ရွာလို့ ခေါ်ခဲ့ရာ ကနေ ဒီနေ့ အချိန်မှာတော့ ဗမွန်ရွာ ဆိုပြီး ခေါ်နေကြတဲ့ ရွာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရွာလေး မှာတော့ လက်ဖက် စိုက်ခင်းတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို ပလောင် တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူ တွေရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ တွေကို လည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း ၁ နှင့် အပိုင်း ၂ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
(Tasty Trip အစီအစဉ် ကို MRTV ရုပ်သံလိုင်းမှ တဆင့် အပတ်စဉ် ပြသ ပေးနေ ပါပြီ။)
Mizzima Channel - YouTube မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 08, 2015 No comments:
(Tasty Trip) ရသများနဲ့ ခရီးစဉ်4March 2015
မိုးကုတ်မြို့ - အပိုင်း ၁
ရသများနဲ့ ခရီးစဉ် အတွက် မိုးကုတ်မြို့ကို သွားနေ ပါပြီ။ မိုးကုတ် မြို့ဟာ မြန်မာ့ ပတ္တမြား မြေ ဖြစ်သလို ကမ္ဘာ ကပါ သိနေတဲ့ ပတ္တမြားမြေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရိုးရာ ဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှု တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ အများ အပြား တွေ့နိုင်တဲ့ ဒေသလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးကုတ်မြို့ - အပိုင်း ၂
မိုးကုတ် မြို့မှာ ပတ္တမြားတွေ၊ ကျောက်မျက် ရတနာ တွေကို ဘယ်လို ပုံစံတွေနဲ့ တူးဖော်နေ ကြသလဲ ?
ဒါတွေကို သိဖို့ ဆိုရင်တော့ Tasty Trip ရဲ့ မိုးကုတ် ခရီးစဉ်ကို လေ့လာ ကြည့်လိုက်ပါ။ မိုးကုတ်မြို့ ဆိုတာ ရတနာ မြေပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မြို့ တစ်မြို့ ဆိုတာ ကိုလည်း သိလာ ပါလိမ့်မယ်။
မိုမိုရေ... ၀ူး ဆိုတဲ့ အသံက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရေပန်းစား ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန် ထိလည်း မိုမိုလို့ ဆိုရင် ဆင်
မကြီးမိုမိုကို ဆိုလိုမှန်း ကလေးတွေက သိကြမြဲပါ။ လူစကားမပြောတတ်တဲ့ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပေ­မယ့် လူ
စကားကို အနီးစပ်ဆုံး နား လည်ပြီ­း ပြည်သူကို ဖျော်ဖြေ ခဲ့တဲ့ ဆင်မကြီး မိုမိုကို ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန် ဥယျာ­ဉ်သို့
ရောက်ဖူးတဲ့ သူတိုင်းက မမေ့မလျော့ သွားရောက်ကြည့်ရှုကြလေ­့ရှိပါတယ်။ ချစ်ချစ် ခင်ခင်နဲ့ အစာကျွေးကြ
ဆင်မကြီး မိုမိုဟာ အခု အခါမှာ အသက် (၆၁) နှစ် တိတိ ပြည့်ခဲ့ ပါပြီ။ မိုမိုရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန် ဥ
ယျာ­ဉ်မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က တခမ်းတနား ကျင်းပခဲ့ပါ­တယ်။ မွေးနေ့ပွဲကို မိုမိုကိုချစ်တဲ့ ပြည်
သူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်တက်ရောက­်အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြ­ီး မိုမိုနဲ့ အတူနေထိုင်တ­ဲ့ ဆင်ကြီးတွေလည်း
မိုမိုအပါအ၀င် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က ဆင်တွေက မွေးနေ့ကိတ်ပုံစံပြုလု­ပ်ထားတဲ့ အသီးအနှံပေါင်းစုံကို အားပါး
တရ စားသုံးရင်း ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုမိုကိုချစ်တဲ့ လူထုက ဟက်ပီးဘတ်ဒေးသီချင်းက­ို ပြိုင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 24, 2014 No comments: